अवैद्यानिक महासंघलाई यातायातमन्त्री र महानिर्देशकद्वारा वैद्यता ! – इ – डायरी एक्सप्रेस
अवैद्यानिक महासंघलाई यातायातमन्त्री र महानिर्देशकद्वारा वैद्यता !
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागमा खारेज भइसकेका समितिहरुको महासंघ नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघका नेताहरुलाई पुनः वैधता दिएर महानिर्देशक गोगन हमाल र मन्त्री बसन्त नेम्बाङले गाइजात्रा नै देखाएका छन् । महासंंघ संस्था दर्ता ऐन २०१८ अन्तर्गत सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गरिएको संस्था हो । तर, संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता गरिएका ३०७ वटा समितिहरु २०७५ साल वैशाख ४ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट खारेज भएका थिए । तिनै समितिबाट २०७४ साल माघ १६, १७ र १८ गते चितवनमा सम्म्पन्न साधारण सभाबाटमहासंघको नेतृत्व चुनिएको थियो । तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले महासंघका नेताहरु योगेन्द्र कर्मचार्य, सरोज सिटौला र विजय स्वारलाई हामीले तिमीहरुको कानूनी वैधता चिन्दैर्नौ भन्दै बैठकबाटै निकालिदिएका थिए । सिण्डीकेट हटाउन दिलो ज्यान दिएर लागेका महानिर्देशक भट्टराईलाई पछि मन्त्री रघुविर महासेठसँगको साँठगाँठका कारण सरुवा गरिएको थियो । तर, त्यो अवैद्य महासंघलाई महानिर्देशक हमालले बैठकमा बोलाएर सरकारी वैद्यता दिलाएकोमा आम कर्मचारीहरु नै दंग परेका छन् ।
ऐनका कारण राज्यलाई अर्बौ नोक्सानी
गाडीहरुको पञ्जिकरणका लागि एउटा गाडीको बिलम्ब दस्तुर र ५० वटा गाडीको एउटै दर छ । एउटा गाडी पञ्जिकरण गर्दा बिलम्ब दस्तुर पाँच रुपैया छ । तर, एउटै रसिदमा एक सय वटा गाडीको पन्जिकरण गर्दा पनि पाँच हजार रुपैया नै लाग्ने अव्यवहारिक ऐन विद्यमान छ । साविकको ऐनको संशोधन नहुँदा अहिले राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोरोको छ । २०७६ साल जेठ १८ गते पछि सबै समिति अन्तर्गत सञ्चालित गाडीहरु एकवटा गाडीहुनेहरु घरेलुमा र पाँचवटा गाडी हुनेहरु कम्पनीमा गएर दर्ता गरी पञ्जिकरण गरिएका छन् । २०७५ साल चैत्र १ गतेबाट २०७६ जेठ १८ गतेसम्म पञ्जिकरण गराउन समय दिइएको थियो । अहिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा १७ हजार ९९ वटा गाडीहरु दर्ता गरिएको बताईन्छ । तर, घरेलुमा कति गाडीहरु दर्ता भए विभागका अधिकारीहरु बताउन चाहदैनन् । पञ्जिकरण गरिएको यथार्थ संख्या पनि अहिलेसम्म नै गोप्य राखिएको छ । यसरी राज्यलाई अहिलेसम्म सबै पञ्जिकरण नगर्दा वर्षेनी पाँच अर्ब पचास करोड भन्दा बढि राजस्व नोक्सान हुन पुगेको छ ।
खारेज गरिएका समितिको सट्टामा गैर कानूनी रुपमा कम्पनीलाई सदस्यता
बैठक भत्ता खानकै लागि महासंघका नेताहरुले २९४ वटा समितिलाई कम्पनीमा रुपान्तरण भएको नाममा महासंघको सदस्यता दिलाएका छन् । सदस्यका लागि एउटा प्रालि कम्पनीले पाँच हजार देखि पच्पन्न सय रुपैया बुझाउनु पर्ने छ । साथै मासिक एक हजार देखि पाँच हजारसम्म लेवी तोकिएको छ । यसरी सुरुमै १४ लाख ७० हजार उठाएर मासिक लेबी उठाएका छन् । दादागिरी देखाएर पुरानै शैलीमा हैकम चलाउँदै आएका महासंघका नेताहरुले वर्षेनी कार्यक्रमका लागि भन्दै गाडीका एजेन्टहरुसँग थप चन्दा सहयोग उठाउँदै आएको एक जना गाडी मालिकले नाम नबताउने नाममा गुनासो गरेका छन् ।
त्यसै गरी होम प्रसाद अधिकारी अध्यक्ष रहेको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले पनि १८० वटा प्रा.लि. अन्तर्गत दर्ता गरिएका कम्पनीहरु सदस्य बनाएर प्रति कम्पनी पाँच हजार देखि पच्पन्न सय रुपैया लिँदै आएका छन् । गैर कानूनी रुपमा रकम असूल गर्ने महासंघका नेताहरुलाई अहिले पनि मन्त्री र महानिर्देशकले वैधता दिँदै साथ दिएको यातायात क्षेत्र सुधार अभियन्ता प्रेम बहादुर थापा बताउँछन् ।
अहिले महासंघको वैधता समेत नरहेको अवस्थामा यातायात विभाग र मन्त्रालयले नबुझिकनै बैठकमा बोलाएर गम्भिर भूल गरेका छन् । मन्त्री नेम्बाङले पनि पुरानै मन्त्रीहरुले जस्तै महासंघका नेताहरुलाई वैद्यता दिएकोमा यातायात क्षेत्रका विज्ञहरुले दुःख व्यक्ति गरेका छन् ।
अग्रिम टिकट खोल्न दवाव
व्यवसायीहरुले अग्रिम टिकट खोलेर जनताको पैसा संकलन गर्ने योजना गरिरहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । सरकारले दशैंको समयमा अग्रिम टिकट बुक गर्न अनुमति दिँदै आएको भएपनि अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने कारणले गाउँ नजान स्वास्थ्य मन्त्रालयले आम जनतालाई आग्रह गरिरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागमा व्यवसायी नेताहरु अग्रिम टिकट खोलेर पैसाको जोहो गर्ने योजनामा छन् । दैनिक विभागमा धाएका नेताहरुले दशैका लागि भन्दै अग्रिम टिकट खोलेर राज्यले ‘लकडाउन’ गरी हालेमा जनताका पैसा फिर्ता गर्नु नपर्ने र एक सीटमा दुई जना नै राखेर चलाउन पाउनुपर्ने माग राखेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्बाङ मार्फत कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिमा पठाएका छन् ।
राज्यले लकडाउन गर्ने कि नगर्ने अवस्थाको एकिन भइनसकेको अवस्थामा अग्रिम टिकट खोल्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठ भएको यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापाको भनाई छ । यसैबीच सरकारले बैंक ब्याजमा कुनै छुट नदिएको र व्यवसाय नै ध्वस्त भएको भन्दै होम प्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा रहेका सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले मंसिर देखि आन्दोलन गर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष अधिकारीले आफै मात्रै बैद्य रुपमा महासंघको अध्यक्ष भएको बताएका छन् ।
Previous सुन्दर आवरणले तनाबमुक्त पार्नुका साथै ओंठमा मुस्कान ल्याउँछ – सौन्दर्यविद् दुर्गा विष्ट
Next सरकारको निर्णय व्यवसायीद्वारा अवज्ञा/घटेन भाडा, यात्रुहरु मर्कामा